Xarunta dhexe ee AMISOM ee Xalane oo loo xiray cudurka coronavirus dartiis – Banaadir weyne
AMISOM ayaa ku dhawaaqday in la xiray Xaruntoodii ugu weeyneyd ee Xalane ee ku dhex-taalla Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, sababo la xiriira faafida Cudurka halista ee Coronavirus.
Qoraal kasoo baxay Taliska AMISOM ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in wixii Maanta ka bilowda la xiray Xarunta Xalane ee AMISOM la xiray, isla markaana ay xirnaan dooto muddo 30-maalmood ah.
Sidoo kale qoraalka ay soo saartay AMISOM ayaa waxaa lagu sheegay in gabi ahaan la joojiyay dhaq-dhaqaaqyadii Xarunta Xalene oo ay ku dhex yaallaan Safaaraddo badan, Xarumo diblomaasiyiin iyo Xafiisyada UN-ka.
Waxaa kaloo la hakiyay dhamaan ganacsiyada iyo dhismayaashii ka socday Xarunta ugu weeyn AMISOM ee Xalane, waxaana Amarka lagu joojiyay dhaq-dhaqaaqyada ka jiray halkaas lagu wargeliyay Shaqaalaha ka howlgala Xarunta.
Si kastaba Jimcihii lasoo dhaafay ayaa waxaa la shaaciyay in qandaraasle u shaqeeya UN-ka, kuna sugan Xarunta Xalene ee Muqdisho laga helay Cudurka halista ee Coronavirus oo haatan fara ba’an ku yaalla dalal badan oo ku yaalla Caalamka. – Calanka Media